Shadowlands ရဲ့ Player choice စနစ်ကို ပိုဦးစားပေးသွားမယ့် World of Warcraft – Gaming Noodle
ကျွန်တော်တို့ gamer တွေ အနေနဲ့ အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ game တွေမှာ အတွေ့များလာရတာကတော့ Player Choice System ပါပဲ။ Player တွေဟာ မိမိတို့ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ပေါ် မူတည်ပြီး story line တွေ ကွဲသွားမယ်၊ ကြားထဲက အကြောင်းအရာတွေ၊ ending တွေ ကွဲသွားမယ်၊ ကိုယ်ပိုင် story telling လုပ်နိုင်မယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေဟာ gamer တွေအတွက် သည်းခြေကြိုက်အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု World of Warcraft: Shadowlands မှာလဲ ဒီ player choice ကို ဦးစားပေးထားတဲ့ covenant system အသစ်တစ်ခု ပါလာခဲ့ပါတယ်။ player တွေဟာ level max 60 ရောက်တာနဲ့ shadowland ရဲ့ native tribe covenant ၄ ခုထဲက မိမိတို့ နှစ်သက်ရာ covenant တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရမှာပါ၊ ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ covenant ပေါ်မူတည်ပြီး story line campaign တွေ ပြောင်းလဲကုန်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာ covenant ရဲ့ spell အသစ်တွေ၊ soulbinds လို့ ခေါ်တဲ့ talent တွေ၊ mount တွေ၊ item အလှတွေကိုပါ သီးသန့် ရကြမှာပါ။ Covenant ရွေးချယ် တဲ့ပေါ် မူတည်ပြီး game play ဟာ တော်တော်လေး ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် player တွေအနေနဲ့ သေချာစဥ်းစား ရွေးချယ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
Shadowland ရဲ့ native tribe တွေဖြစ်တဲ့ ဒီ Covenant ၄ ခု ကတော့
1. Kyrian လို့ခေါ်တဲ့ wing မျိုးနွယ်တွေ
2. Necrolords လို့ခေါ်တဲ့ necromancer တွေ
3. Night Fae လို့ခေါ်တဲ့ တမလွန်တောအုပ် ထဲက fairy မျိုးနွယ်တွေ
4. Venthyr လို့ခေါ်တဲ့ vampire နဲ့တူတဲ့ dreadlord တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Character ဟာ shadowland ထဲက ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ဒီ covenant တွေထဲက တစ်ခုနဲ့အတူ လက်တွဲရမှာပါ။ နောက်ပီး Covenant တစ်ခုချင်းစီဟာ သူ့ story line နဲ့သူ unique ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Lore အရတော့ Kyrian တွေဟာ Shadowland ထဲက Bastion လို့ခေါ်တဲ့ အရပ်မှာ နေကြတဲ့ အတောင်ပံပါ မျိုးနွယ်တစ်စု ဖြစ်ပါတယ်။ သေခြင်း နဲ့ ရှင်ခြင်း ကြားထဲမှာ လိုသလို သွားလာနိုင်ကြပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အဓိက တာဝန်က mortal realm ထဲမှာ သေသွားတဲ့သူတွေရဲ့ soul တွေကို realm of death ဖြစ်တဲ့ shadowland ထဲကို ပို့ဆောင်ပေးရတာပါပဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ kyrian တစ်ယောက် ဖြစ်လာတာနဲ့ အရင် အသက်ရှင်စဥ်က ဘဝကို အပြီးတိုင်မေ့ပစ်လိုက်ရပြီး shadowland ကို အမှုထမ်းမယ့် kyrian တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ Bastion မှာ ဘဝသစ်ကို ပြန်စကြရပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘဝဟောင်းကို မမေ့ပစ်နိုင်တဲ့ kyrian တစ်ယောက် ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့…
Covenant power အရ ပြောရရင် kyrian covanent ရဲ့ main ability ဟာ combat မှာ max သွေးရဲ့ 20% အထိ ပြန် Heal ပေးနိုင်ပီး poison ၊ disease နဲ့ curse တွေကို clean ပေးနိုင်တာကြောင့် pvp ရော pve မှာပါ တော်တော်လေး အသုံးဝင်တဲ့ covenant ဖြစ်ပါတယ်။
Necrolord တွေကတော့ shadowland ရဲ့ တကယ့် native အစစ်တွေ ဖြစ်ကြပြီးတော့ necromancing magic ရဲ့ ဇာတိမွေးရပ်မြေ ဖြစ်တဲ့ Maldraxxus အရပ်မှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။ Necrolord တွေဟာ shadowland ရဲ့ စစ်အင်အား ဖြစ်တဲ့အလျောက် အမြဲ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်နေရတာကို ကြိုက်တဲ့သူတွေပါ။ တနေ့မှာတော့ Necrolord တွေရဲ့ အကြီးအကဲ Primus ပျောက်ဆုံးသွားပြီး Maldraxxus ဟာ necrolord ပြည်တွင်းစစ်ပွဲကြီးကြောင့် စစ်မီးလျှံတွေ တောက်လောင်လာပါတော့တယ်။
Covenant power အရတော့ Necrolord main ability ဖြစ်တဲ့ fleshcraft ဟာ max hp 20% ကို shield အနေနဲ့ ပတ်ပေးတဲ့အတွက် tank တွေ hp pool များတဲ့ class တွေအတွက် လိုက်ဖက်တဲ့ covenant ဖြစ်ပါတယ်။
Night fae တွေကတော့ တမလွန်တောအုပ် Ardenweald မှာနေတဲ့ Fae မျိုးနွယ် fairy လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Ardenweald ကို ရောက်လာကြတဲ့ wild god တွေ၊ loa တွေရဲ့ soul တွေကို စောင်ရှောက်ရတဲ့ nature force ရဲ့ နတ်သူငယ်လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာ night fae တွေရဲ့ ဘုရင်မဖြစ်တဲ့ winter queen ဟာ Ardenweald တောအုပ်ကြီး ပျက်စီးပြိုလဲသွားတဲ့ နိမိတ်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ အခါမှာတော့…
Covenant power မှာတော့ movement speed 50% နဲ့ blink ၃ ခါခုန်နိုင်တဲ့ ability ကြောင့် အခုလက်ရှိမှာ night fae ဟာ လူကြိုက်များတဲ့ covenant တစ်ခု ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
Venthyr တွေကတော့ နေရောင်ကိုကြောက်ပြီး အမှောင်ထဲမှာပဲ နေလေ့ရှိကြတဲ့ vampire နဲ့ဆင်တူတဲ့ dreadlord မျိုးနွယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Revendreth အရပ်မှာရှိတဲ့ castle တွေမှာ နေထိုင်ပြီး အရမ်းကို မာနထောင်လွှားကြတဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေပါ။ Shadowland ကို ရောက်လာကြတဲ့ အပြစ်သားတွေ၊ လူဆိုးတွေရဲ့ soul တွေကို အပြစ်ပေးရတဲ့ sinner တွေဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ Soul တွေကို နာကျင်အောင် လုပ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ anima energy ကို သောက်သုံးပြီး အသက်ဆက်နေကြရတဲ့ Venthyr ပြည်သူတွေနဲ့ ပြည်သူတွေကို မငှဲ့ညှာပဲ anima တွေကို အပိုင်စီးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ တကိုယ်ကောင်းသမား မြို့စားကြီး တွေ့ကြတဲ့ အခါမှာတော့…
Covenant power အရ ပြောရရင်တော့ Door of shadows လို့ခေါ်တဲ့ long range teleportation ability ကို ပိုင်ဆိုင်ရမဲ့ covenant ဖြစ်တာကြောင့်ရော အရမ်းကို cool ဖြစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းကာလာ အနေအထားကြောင့် အခုလက်ရှိမှာ လူကြိုက်အများဆုံး covenant ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
ဘရိုတို့ရော ဘယ် Covenant ကို သဘောအကျဆုံးလဲ။ Gaming Noodle ကနေ ဂိမ်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အစဉ်မပြတ် တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။
#WoW #Shadowlands #GamingNoodle